Hordhaca Horyaalka Somaaliya-Yaa Guulo Badan Kooxaha Heegan VS Dekedda – Goobjoog News
Hordhaca Horyaalka Somaaliya-Yaa Guulo Badan Kooxaha Heegan VS Dekedda
Kooxda ciidan booliska Soomaaliyeed ee Heegan ayaa soo dhawaynaysa dhigeeda Dekedda oo ah naadiga difcaanaysa horyaalka labadii xili ciyaareed lasoo dhaafay wuxuuna kulan u yahay labada dhinac kulamadoodii 8-aad horyaalka Somalia Premier xili ciyaareed 2018-2019.
Xidigaha kooxda Heegan kulankii u danbeeyay horyaalka waxa ay natiijo 1-0 ka gaareyn kooxda ay sida weyn u xifaaltamaan ee Horseed,Heegan waxa ay ku jirtaa kaalinta 2aad ee kala horeynta horyaalka waxayna lee dahay 15-dhibcood.
Naadiga Dekedda ciyaartii u danbeesay horyaalka waxa ay natiijo 2-1 kaga adkaadeen Jazeera Sports Club waxaana goolasha u dhaliyay Towfiq Zakariye,wiilasha xafidinaya horyaalka labada sano lasoo dhaafay waxa ay fadhiyaan kaalinta 1-aad ee kala sareynta,iyagoo leh 16-dhibcood.
Xaqiiqooyinka Kulanka Ka Hor
-6 June 2018– Maamulka kooxda Heegan ayaa warbaahinta usoo bandhigay xidigaha kala ah Cabdi Casiis Catoosh iyo Mustaf Maxamed Yuusuf oo ka mid xirfadyahanadii waqtiga wacan kusoo qaatay L.L.P Jeenyo inkastoo Catoosh ee Heegan kaga yimid kooxda Dekedda.
15-May 2018–Xidigihii hore kooxda Jeenyo Daa’uud Cabdullahi Tubaal iyo Feysal Xasan Xaashi ayaa Dekedda la hantay horyaalka Somalia Premier League iyo Somali Premier League waxayna iminka ka mid yihiin shaxda ugu wanaagsan ee Tababare Yuusuf Cali Nuur (Yuu-Cali).
-Maxamed Nuur Cabdi uu horay ugu soo ciyaaray kooxda Heegan oo iminka ku sugan Dekedda ayaa waxaa u suura gashay in uu kooxdiisa la hanto horyaalka iyo Somali Super Cup laacibka waxa uu ka dheelaa qadka dhexe.
-19 September 2018- Catoosh ayaa kooxdiisa Dekedda ku laabtay,isagoo mudo sanad ah kabtan u ahaa kooxda ciidan booliska ee Heegan intaa uu ku sugnaa waxaa u suura gashay in uu dhaliyo ilaa 5-gool tartamadii uu qeyb galay.
“Sababta ugu weyn ee aan ugu laabtay kooxda Dekedda waxa ay tahay jacelka aan u qabo maamulka,saaxiibadyada iyo taageerayaasha waxaana go’aan ku qaatay in kasii mid ahaado sanadaha soo aadan si aan u sii balaariyo xirfadayda iyo in aan la hanto koobabka waaweyn ee dalka” waxaa Goobjoog Sports ugu waramay ”Cabdi Casiis Catoosh.
-Kooxda Heegan hanashada horyaalka Somalia Premier League waxaa ugu danbeesay sanadii 2015 oo iminka laga joogo mudo shano ah,balse iminka waxa ay qabaan rajada ku guulaysiga horyaalka Somalia Premier League 2018-2019.
-Kulanka waxaa iska hor imaandoona xidigihii hore Jeenyo Cabdi Casiis Catoosh,Feysal Xaashi iyo Daa’uud Tubaal oo kasoo muuqdandoona dhinaca Dekedda,yeelkeeda taa Heegana waxaa ku sugan oo shabaqa u ilaalinaya goolhaye Mustaf Maxamed Yuusuf .
Macalinka kooxda Dekedda Yuusuf Cali Nuur (Yuu-Cali) mar ii bisha Febraayo 2019 la hadlay Goobjoog Sports waxa ii sheegay in isaga iyo kooxdiisa ay rabaan in ay dhigaan taariikh cusub oo ku aadan hanashada horyaalka Somalia Premier League sanadkii sadeexaad oo xariir ah.
Kulankamadii U Danbeeyay Labada Koox
12/03/2018 Heegan SC 0:0 Dekedda SC
02/05/2018 Dekedda SC 1:1 Heegan SC
16/02/2017 Dekedda SC 1:1 Heegan SC
12/05/2017 Dekedda SC 0-0 Heegan SC
03/03/2016 Heegan SC 3:0 Dekedda SC
28/12/2015 Dekedda SC 1:0 Heegan SC
27/02/2015 Dekedda SC 0:2 Heegan SC
29/05/2015 Heegan SC 2:0 Dekedda SC
07/06/2012 Heegan SC 1:1 Dekedda SC
29/09/2012 Dekedda SC 2:4 Heegan SC
Tartanka:-Horyaalka Somalia Premier League 2018-2019
Kooxaha-Heegan VS Dekedda
Cimiladda Xiliga Ciyaarta: – 32°27°
Garoonka: – Banaadir Stadium
Ciidanka Kenya Oo Burburiyey Goobo Ay Leedahay Shirkadda Hormuud, Waa Gabboodfal Joogta Ah.
Madaxweyne Farmaajo Oo Faah-faahiyey Heerka uu Joogo Qabyo-tiro Dastuurka KMG ah
Jubaland-Maxaa Sababay Guuladaradii Kooxda Kaneva